HyperX Alloy Core keyboard uye Pulsefire Core mbeva, mune-kudzika ongororo | Gadget Nhau
Miguel Hernandez | 02/09/2021 13:34 | Yakagadziridzwa ku 02/09/2021 13:40 | Makwikwi, General, Reviews
Izvo zvishongedzo zvakatumidzwa Kutamba Icho chigadzirwa chiri kuwedzera kudiwa neavo vanopedza mazuva marefu ekunakidzwa pamberi pechirinda, nekudaro, mbeva yakanaka uye yakakosha keyboard zvakakosha zvinhu kuti uwane mibairo yakanaka mumasikati edu marefu ehondo yedhijitari. HyperX Izvo zvave zvichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vanonyanya kutamba mitambo kwemakore, uye izvi zvatinoongorora nhasi zvinhu zviviri zvakakosha izvo zvisingakwanise kushayikwa mukumisikidza kwako.
Isu tinokuratidza iyo Alloy Core keyboard uye iyo Pulsefire Core mutambo wemitambo kubva kuHyperX kuti ugone kuratidza hunyanzvi hwako nematurusi akanakisa. Senge kuti izvo zvaive zvisina kukwana, pamusoro peizvozvo iwe unokwanisa kuzviwana mahara zvachose neichi chidimbu cherufu chatiri kukuitira, uri kuchipotsa here?
Isu tichangosvika zviuru gumi vanyoreri paYouTube, kwaunogona kuwana kwedu kwese kuongorora uye dzidziso, saka tasarudza kuipemberera pamwe nemi mose neruoko rwe HyperX, iyo femu yaida kubatana nekutipa keyboard Chiwanikwa chiwanikwa negonzo Pulsefire Core, zviviri zvezvakakosha zvezvigadzirwa zvekumisikidza zvakanaka, saka tinokusiya pano ongororo yeimwe yeaya zvigadzirwa, uye pamusoro pezvose Tinokukoka iwe kuti utore chikamu muRaffle, uye isu tinokusiya iwe pazasi pemamiriro ekutora chikamu:
Iwe unoda kuhwina iyi keyboard uye mbeva pack ye @HyperX? Tora chikamu mune yedu #lottery uye tora Pulsefire Core yemitambo mbeva uye Alloy Core keyboard.
- Mhinduro: #HyperXActGadget#Rotari #Gaming #HyperX #Gadgetshttps://t.co/UzTO2w2DGA
- Gadget Nhau (@agadget) September 2, 2021
1st tevera HyperX uye ActualidadGadget pa Twitter
2nd kunyorera kuYouTube chiteshi cheActualidadGadget
Yechitatu Ipai RT kune iyo dhizaini tweet
4th Komenda ine iyo hashtag #HyperXActGadget
5th Uchakunda kumwe kutora chikamu kana ukataura pavhidhiyo
Takatarisana nedanho renyika, uyo anokunda anofanira kunge achigara munharaunda yenyika (Spain). Isu tichapa iye anokunda zvese mumashoko evhidhiyo yeYouTube uye kuburikidza neyedu account yeTwitter. Uyo anokunda dhirowa achaziviswa pane yedu RRSS uye chiteshi pa10 / 09/21 na12: 00 maawa.
Iyi membrane keyboard HyperX ane zvimwe zvimiro 443,2 millimeter yakafara; 175,3 millimeters yakadzika uye 35,6 millimeters kumusoro, isu tinowana yakazara-saizi keyboard, ndiko kuti, pakati pe104 uye 105 makiyi zvinoenderana nemitemo yemusika. Nezve iyo uremu, zvishoma kupfuura kirogiramu kuti igare zvakanaka patafura (kunyanya 1.121 gramu).
Tiri kutaura nezve khibhodi ine tambo yakarukwa, ine hurefu hwemamita 1,8, zvakakwana kuti "nyatsoviga" tambo nenzira yedu yekumisikidza uye iite seyakareruka sezvinobvira.
Nezve izvo zvehunyanzvi maratidziro, isu tinorangarira kuti iyo membrane membrane, ine kubatana USB 2.0 uye yekumhanyisa kumhanyisa ye1.000 Hz. Zviripachena iine yakawanda-kiyi anti-ghosting system uyezve ine yakatsaurwa makiyi e multimedia control.
Tine «mutambo muoti» kuwedzera izvo maficha, uye senge chero yakanaka khibhodi Kutamba membrane, isu takatarisana nekhibhodi isingagadzike kuputika kwemvura. Isu zvakare tine akateedzana ekukurumidza ekuwana mabhatani izvo zvinotitendera kuti tigadzirise kupenya, nzira dzekuvhenekesa uye mamiriro emutambo, chimwe chinhu chatinokoshesa kana tichitaurirana nemamenyu akasiyana ekuchengetedza nguva.
Tinogona kunyange, kana tichida, kukiya iyo keyboard. Iyo ine mwenje wechiedza ine nhanhatu dzakatemwa mhedzisiro kumusoro: Ruvara kutenderera, spectrum wave, kufema, yakasimba, nzvimbo shanu, uye aurora. Zvese izvi mwenje zvinozoendeswa kunzvimbo yakakosha, iyo inovhenekera zvakafanana, asi kana tichida, kuburikidza nesoftware tinogona kuzvimiririra kugadzirisa makiyi. matunhu mashanu ane mavara.
Kuve membrane keyboard, inopa mhinduro yakanaka uye zvechokwadi musiyano unozivikanwa kubva kumakiniki emakiribho, iyo iyo yakanyarara kwazvo. Nenzira imwecheteyo, kufamba kwemakiyi kwakafanana chaizvo nekamakaniki keyboard uye ine mhinduro inokurumidza. Iyi keyboard, kuwedzera kune Windows inoenderana, Inoenderana nePS4, PS5, Xbox Series X / S uye Xbox One. Pasina kupokana, imwe inonakidza imwe nzira iri kutenderera makumi mashanu euros pawebhusaiti yepamutemo ye HyperX and in zvakajairika zvitoro.
Iyo mbeva yakakosha kana kukosha kupfuura yakanaka khibhodi, saka ikozvino isu tinoenderera mberi kuongorora iye akakwana shamwari, iyo Pulsefire Core kubva HyperX. Isu tine symmetrical ergonomic mbeva ine zviyero zve 119,3 millimeters pakureba, ne 41,30 millimeters pakureba uye 63,9 millimeters pakureba. Iko kurema, kana isu tisingaverenge tambo iri 87 magiramu, netambo inokwira kusvika kumagiramu gumi nemaviri, saka iyi mbeva iri nyore mukati mechikamu chayo.
Iyo tambo, yakakosha ruzivo, Iyo yakareba 1,8 metres, kukwanisa kuwana kufamba uye nyore kugadzirisa kuzvinodiwa zve setup yedu. Iyi USB tambo ndeye 2.0 tekinoroji.
Tackle performance neiyo sensor Pixart PAW3327 ine resolution ye6.200 dpi uye nhevedzano yezvigadziriso zvine yepamusoro bhatani re800 / 1600/2400 uye 3200 dpi zvinoenderana nekuravira kwemumwe mushandisi. Iyo yekumhanyisa ndeye 220 IPS uye iyo yekuwedzera kukurumidza ndeye 30G. Ngatipfurei mabhatani manomwe, ayo anovimbisa inguva yehupenyu hweanosvika mamirioni makumi maviri.
Mwenje yaigona kushaikwa RGB maLED ane imwe mwenje yekuyera uye mana ekupenya mazinga kuitira kuti tikwanise kuzvigadzirisa zvinoenderana nezvatinoda kana zvatinoda. Kune chikamu chayo, ine 1000 Hz chiyero chekuvhota uye fomati yedata ye 16 bits / akabatana. Sezvakaita nekhibhodi yapfuura, iyi mbeva inoenderana nePC, pamwe nePS5, PS4, Xbox Series X / S uye Xbox One, saka kuenderana hakufanirwe kunge kuri nyaya.
Tine akateedzana ematehwe ehukuru hwakakurumbira uye iwo zvakare ane zvikamu zvekusiya mubhokisi pacharo. Zvakafanana nekhibhodi, yemahara download software HyperX NGenuity Izvo zvichatibvumidza isu kuti tiite chero gadziridzo, kunyanya mukugadzirisa kwechiedza. Mabhatani ayo manomwe anonyatso gadziridzwa. Kune iro chikamu, mbeva ine mutengo wakaringana zvine mwero uyo unogara pane angangoita 35 euros pawebhusaiti yepamutemo ye HyperX and in zvimwe zvitoro.
Yakanakisa keyboard uye mbeva combo yevanonyanya kutamba pamitengo inonzwisisika, Chii chauri kumirira kuti utore chikamu mune yedu raffle uye uwane ino yemahara keyboard uye mbeva kurongedza? Usarase uyu mukana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » HyperX Alloy Core keyboard uye Pulsefire Core mbeva, shamwari dzakanaka dzemitambo [SWEEPSTAKES]
Kutora chikamu muraffle
Pindura kuna Asgor